Tablelọ oriri na ọ Tableụụ ndina - China Bed Bed Table Manufacturers, Suppliers
YF-H-213 Silver Ngwá Ọrụ Faux Akpụkpọ anụ Contemporary Nightstand
Ihe eji achọ mma nke ukwuu: Tebụl njedebe anyị bụ ihe a ma ama n'etiti ndị na-achọ mma na ndị na-emepụta ihe n'ihi na enwere ike igosi ya n'ime ụlọ ọ bụla, Jiri ya dị ka tebụl kọfị n'ime ime ụlọ ma ọ bụ tebụl dị n'akụkụ ụlọ nnabata.
YF-H-212 h Nightstand Up Bedstered Isiokwu Isiokwu na Igbe Igbe Gold Metal Base
Soft soft upholstery na mara osisi ụkwụ na-eme ka Artis nightstand a na na bedside enyi. Egosiputara usoro zuru ezu, akwa ocha faux akpụkpọ anụ na-eme ka ọdịdị akwa a dị mma ma dịgide adịgide.
YF-H-210 Oge okomoko White & Gold 3 Drawers Bedroom Nightstand Square Bedside Table
Don'tkwesighi itinye ego iji gbanwee ime ụlọ ihi ụra n'ime oghere mara mma ị na-arọ nrọ banyere ya, ebe ndị a na-ahụkarị n'abalị bụ ihe akaebe. Ma ịchọrọ otu drawer ma ọ bụ atọ Ekike mara mma: imepụta ọgbara ọhụrụ nwere akụkụ silhouette na ụda ọcha na-enwu gbaa na-agbakwụnye ọmarịcha ịma mma na ọkaibe aka na ime ụlọ gị.
Debe ọgbara ọhụrụ gị nke ihe ndozi gị na-aga na tebụl akụkụ a. Ntọala ntọala ọla edo na-enye nkwụsi ike ma mepụta silhouette na-adọrọ adọrọ, na marble dị elu mezue tebụl a mara mma. Mee ka ngwoolu a kwekọrọ na ite eji achọ mma, tinye ya n'okpuru nka nka, ma ọ bụ jiri ya dị ka tebụl arụ ọrụ iji mee ka ihe ịchọ mma gị mma.
Okpokoro okpokoro a na-enweghị atụ pụrụ iche na-eme ka ụda olu gị dị mma iji mepụta ikuku dị mma nke ụlọ gị ma mee ka ihe ịchọ mma gbara ya gburugburu.
YF-H-206 Side Isiokwu na Self-emechi Igbe Lacquer X Base Brass Emechara igwe anaghị agba nchara
Sitnọdụ n'etiti ọdịnala na ọdịnala, usoro mgbanwe nke oge a na-enye ọmarịcha ịdị mma ị ga-eji mee ihe n'ime…
Were oso okpokoro Orson dina n ’ime osisi oji. Ọzọkwa dị na eke ma ọ bụ aja aja imecha ka dakọtara gị ime ime.
YF-H-204 White Golden imecha Modern Nightstand Side End Isiokwu na Igbe
Ike: Nnukwu ihe mbadamba na tebụl na-enye gị ohere zuru ezu maka mkpa gị.